February 2020 - Uptodate MM
ေ ပနှ င့် လက် မ အ လိုက် ကုန် ကျ မည့် အုတ် တွက် တဲ့ နည်း
Uptodate MM | February 29, 2020
ပေနှ င့် လက်မ အလိုက် ကုန်ကျမည့် အုတ် တွက် နည်း အုတ်စီနည်း နှင့် တွက် နည်း အုတ်စီရာတွင် ဘိလပ် မြေနှင့် အုတ်ကုန်ကျတာလေးတွေကို ဝါသနာပါတဲ့ စိတ်ဝင်စားသူ များအတွက် ပြန်တင်ပေး တာပါ။ ၉” လက်မ အုတ်ရှိးစီရာတွင် (၁၀×၁၀) ပတ်လည် တစ်ကျင်း စီရာတွင်
သိန်း တစ်သောင်းဆု ကို အံ့ဩဖွ ယ်ဆွတ်ခူး ခဲ့ပုံ ကို ဖွင့် ဟ လာ တဲ့ ယ ခု လ ရဲ့ကံ ထူး ရှင် မိသားစု
၁၃ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီ သိန်းတစ်သောင်းဆုကို ဖြင့် နေပြည်တော်မှဆွ တ်ခူးရရှိ တစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်တုန်းကလည်းနေပြည်တော်မှတောင်နီလေးဆရာတော်ကသိန်းပေါင်းတစ်သောင်းခွဲအမြင့်ဆုံးဆု ကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး အခု၁၃ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ သိန်းတစ် သောင်းဆု ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဆုကြီးကိုတော့ နေပြည်တော်ကဘဲထပ်မှန်ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် နေပြည်တော်မှာကံထူးသွားတဲ့ဆုကြီးနှစ်ခုစလုံးဟာလက်ကျန်ထီတွေထဲကနေဘဲပေါက်မဲနာပါတ် ‌တွေရရှိသွားကြတာပါ အခုသိန်းတစ်သောင်းဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိတဲ့ မိသားစုလေး ကတော့ နေပြည်တော်မြို့မဈေးမှ ထီရောင်းသူ ကိုခိုင်စိုးသူ(၂၈)နှစ်နှင့်ဇနီးမဇာဇာဖြိုး(၂၇)နှစ် သားမြင့်မြတ်အောင် (၁နှစ်ခွဲ)မိသားစုတို့ကထီရောင်းရင်းလက်ကျန်ထီထဲကမှ သုံးစောင်တွဲ ဠ ၁၀၆၈၉၆
သရုပ်ဆောင် ဦးဗေလုဝ အ တွက် အ ချိန် တို အ တွင်း ပြန် လည် ကျန်း မာ လာ လို့ ဝမ်း သာေ န တဲ့ ဂွမ်းပုံ
တ က္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံလေးကတော့ ဗေလုဝရဲ့ ကျန်းမာရေးသတင်းကို ကြားကတည်းက သွားရောက်အားပေးစကားပြောချင်ပေမယ့် အခွင့်အရေးမရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဗေလုဝကိုလည်း အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်စေချင်တဲ့ သူမရဲ့ ဆန္ဒကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာပါတယ်။ “ အစ်မလည်း နယ် ရိုက်ကူးေ ရးတွေ များနေတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဦးဗေ ကို သွားမကြည့်နိုင်သေးတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကျန်းမာရေးကို စုံစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ
သ မီး ရည်း စား အ တူေ နပြီး လက် မ ထပ် တဲ့ အ မျိုး သား များ ကို ထောင်ဒဏ် (၅)နှ စ်နှင့် အ ထက် ချမှတ် မည့် ဥပဒေ
သ မီးရည်းစားဘဝတွင် အတူနေထိုင်ပြီး လက်မထပ်သည့် အမျိုးသားများ ကို ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်နှင့် အထက် အရေးယူနိုင်သည့် ဥပဒေရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်း သွား မည် သမီးရည်းစားဘဝတွင် အတူနေထိုင်ပြီး လက်မထပ်သည့် အမျိုးသားများ ကို ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်နှင့် အထက် အရေးယူနိုင်သည့် ဥပဒေ ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်း သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်က
ေ မွှးနေ တဲ့ ငါးကင် ကို ဈေးကြီးေ ပးပြီးေ တာ့စားေ န ကြ တဲ့ နောက် ကွယ် က မစား သင့်ေ သာ အကြောင်း ရင်း
ကျွန်တော် တို့ ဇလားပီးယားငါးတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ် ။ မွှေးနေတဲ့ ငါးကင်ကို ဈေးကြီးပေးပြီးတော့ကိုစားတယ် ၊ စားလို့လဲကောင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတော့ မစဉ်းစား မိကြဘူး ။ ဇ လားဗီးယားငါးတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ ကျယ်ပြန့်စွာမွေးမြူပြီးစားသုံးနေကြတဲ့ ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ကင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြော်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုချက်စားစား စားကောင်းပြီး
သင်္ကြန် အတွက် အ သစ် ထွက် ရှိ လာ တဲ့ အဆိုတော် မေ နာ ရဲ့ “တစ်လုံးနှစ်လုံး ကျွေး ပါ ဦး” သီ ချင်း အ သစ်ေ လး
အ ဆိုတော်မနောကတော့ မြန်မာသံစဉ်တေးသီချင်းတွေကို သီဆိုပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွက်သမျှသီချင်းတိုင်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုကို ရရှိတဲ့ အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ရွှေFM ကချီးမြှင့်င့်တဲ့ ဆုကြီးကို ပါရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါေ သး တယ်။ လ တ်တလောမှာတော့ မနောက မကြာခင်မှာကျရောက်လာမယ့် မဟာသင်္ကြန်ကာလအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး သင်္ကြန် သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေဆီအရောက်ပို့ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။
အေ မရိကန် တွင် COVID-19 ဗိုင်း ရပ်စ်ကြောင့် ပထမ ဆုံး လူေ သ ဆုံး မှု ရှိ လာ
ဝါ ရှင်တန်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ COVID-19 အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပထမဆုံး သေဆုံးမှုရှိလာခဲ့ကြောင်း သိ ရပါတယ်။ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်မြေပေါ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူသေဆုံးမှုရှိလာပြီးနောက် ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလွန်အကျွံ ကြောက်လန့်ခြင်းမဖြစ်ကြရန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က ပြောပါ တယ်။
(၁၃ )ကြိ မ်ြေ မာ က် အောင် ဘာေ လ ထီေ ပါ က် စဉ်(စ/ဆုံး)
သိနျးတဈသော ငျးခှဲဆု ဠ ၂၇၇၄၆၅ သိနျးတဈသောငျး ဠ ၁၀၆၈၉၆ သိနျးငါးထောငျ ယ ၄၃၅၅၈၀ ကဃ ၉၆၄၅၇၂ သိနျး(၂၀၀၀) င ၁၆၄၇၅၁ တ ၁၆၁၀၁၅ ကက ၃၉၁၇၀၄ ဠ ၅၈၅၂၇၆ ကဂ ၄၉၉၁၅၇ ည ၆၅၂၂၄၄ သိနျးတဈထောငျ ခ ၁၇၉၄၇၂
မ ယုံနို င်လောက်အောင် သူ နဲ့ ချွတ် စွ တ် တူ တဲ့ သူ နဲ့ ပုံ တင် လိုက် ခဲ့ တဲ့ Sinon
မိန်း ကလေးစီး ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကြီးတွေ စီးပြီး လမ်းလျှောက်ပြကာ တမူထူးခြား စွာနဲ့ နာမည်ကြီးလာတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် မော်ဒယ် Sinon ကိုတော့ လက်ရှိမှာ မြန်မာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား တော်တော်များများ ကတေ့ာ သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ Sinon ကတော့ Catwalk တွေ လျောက်ရင်း နာမည်ကြီးလာတဲ့ သူတယောက် ဖြစ်သလို
ထားး ခဲ့ တဲ့ လူ ဆီ မှာ အ သ နား မ ခံ ပါ နဲ့ …
မချ စ်တော့တဲ့သူရဲ့ အကြည့်မှာ ချစ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ ကိုမရှာပါ နဲ့ … ကိုယ့်ကိုယ်ကို မညာပါနဲ့ …. ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အရာတွေကို လက် ခံပါ … ဆွဲထားနေသ၍.. အောက်ကျနောက်ကျ တောင်းပန်နေသ၍ မှားနေ အုံးမှာပဲ ….. အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတာကိုပဲ ဖက်တွယ်ချင် ဖက်တွယ်ပါ …. ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကို စီမံဖို့မကြိုးစား ပါနဲ့